Thola ukuthi kufanele uzisebenzise nini futhi ngani! - ULLER
Ski Goggles Thola ukuthi kufanele uwasebenzise nini futhi ngani!
INGABE KUFANELE NGIGQOKE AMA-GOGGLE AMA-SKI NJALO?
Uma uzibuza lo mbuzo impendulo inguyebo! Ngaphandle kokungabaza, ukushushuluza sekufana nesifiso, i-adrenaline nobumnandi.
El ski Ithathwa njengomunye wemidlalo yeqhwa eyinselele kakhulu futhi emnandi ukwedlula yonke, ngoba inezinhlobonhlobo eziningi zezindlela, ukweqa, ama-pirouettes namasu apholile, futhi ashiya abangaphezu koyedwa bengawuvali umlomo. Kepha njengayo yonke imidlalo ye-adventure, uhlala udinga ukuphatha yonke imishini edingekayo ... Ingabe usuyazi vele ukuthi kungani KUFANELE uthathe okuhle ukushushuluza izibuko ukuvikela lapho uqhuba lo mdlalo?
Letha imishini ephelele yezemidlalo ye- ski kunoma yiziphi izindlela zalo kubalulekile ukufeza izinhloso zethu, kufaka phakathi i- ukushushuluza izibuko. Futhi ukuthi ukukhanya ezindaweni ezineqhwa kuphakeme kakhulu, ikakhulukazi ebusika, ngoba isikhundla selanga esibhakabhakeni siphansi, futhi imisebe yelanga iwa nokuthambekela okukhanyayo, okugcina kuyingozi kakhulu empilweni yamehlo ethu. . Ngaphezu kwalokho, lapho sisebenza, ukuzivikela esimweni sezulu nasesithwathwa lapho kushibilika eqhweni kuyadingeka ukuqinisekisa umbono omuhle lapho ushushuluza.
YIMUPHI AMA-SKI GOGGLES OKUFANELE NGIWAKhethe?
Cabanga ukuthi i- izingilazi ze skiKufanele ngokungangabazeki bahambisane namazinga we-ISO ukuze bavikeleke kahle emisebeni yelanga. Kumele futhi bavunyelwe yi-CE futhi balandele izindinganiso zokuphepha zaseYurophu. Ngokufanayo, kubalulekile ukuthi zilingane kahle ebusweni bakho kufaka nezindawo eziseceleni. Khumbula lokho izingilazi ze ski Ngeke nje bavikele amehlo akho emisebeni yelanga, futhi bazokusiza ngokusebenza lapho ushibilika eqhweni, ngoba bazothuthukisa amandla akho okubuka.
Gcina lokhu engqondweni ngokuzayo lapho ukhetha eyakho gafas skiIqiniso ukuthi akuzona zonke ezizofanele ukulingana, futhi okungenani uma uzithenga ezitolo ezingagunyaziwe noma ezimakethe. Akukho lokho! Isincomo ngaso sonke isikhathi ukuthenga i- ukushushuluza izibuko ezitolo zomzimba noma ezitolo eziku-inthanethi ezikunikeza izinketho namamodeli anezindinganiso zekhwalithi ezihamba phambili, nezinto zokwakha ezingcono kakhulu namakristalu.
Ukuba nombono omuhle kakhulu lapho udlala imidlalo eqhweni kuqinisekisa ukuhamba okungcono nobubanzi bokubukwa. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi sikhethe ifayela le- ukushushuluza izibuko okulungile okulingana nezidingo zakho.
Kufanele ukhethe njalo ukushushuluza izibuko ngezici eziphezulu zobuchwepheshe eziqinisekisa ukusebenza okungcono, ukuguquguquka nokuhamba lapho ushushuluza ezimweni ezimbi kakhulu. Kungcono ukutshala imali ngekhwalithi uma kuziwa izingilazi ze ski, bese ukhetha imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Khumbula ukuthi lokhu akusho ukuthenga amaski abiza kakhulu, kepha yilawo ahambisana kahle nezidingo zakho.
YINI IZIKHATHI ZAMA-SKI GOGGLES LENSES AKHONA?
Okwamanje kunezigaba ezahlukahlukene zokuhlunga kumalensi we izingilazi ze ski, kusuka ku-CAT0 kuya ku-CAT4. Izinombolo kusigaba ngasinye zikhombisa ukuthi amalensi amnyama kangakanani nenani lokumunca ukukhanya elikunikezayo. Qaphela ukuthi lokhu kwehlukile kokumunca imisebe, okuvikelwa kwayo kuvela ekuvikelweni kwe-UV400.
I-CAT0 iyona edonsa okuncane (lokhu kucishe kube sobala), kanti i-CAT4 iyona edonsa kakhulu (uzobona ukuthi imnyama ngempela). Into ejwayelekile ukuthi uma ungenaso isimo esikhethekile samehlo, ozowasebenzisa kakhulu yisigaba 1 nesigaba 3 ukuzijayeza ski noma i-snowboard.
Isigaba 0: Cishe angamakristalu asobala nezihlungi zokudlulisa okulula kusuka ku-80% kuye ku-100%. Zingabi nombala noma zibe nombala othambile kakhulu. Zikhonjisiwe ukwenza ski ebusuku noma ekuseni kakhulu ngaphambi kokuphuma kwelanga. Futhi ngezinsuku ezinamafu noma ngamathuba ama-blizzards.
Isigaba 1: Ukuhlunga kokuhambisa kwayo okulula kusuka ku-43% kuye ku-80%. Angamalensi anombala othambile, alungele ukusetshenziswa lapho ukukhanya kunciphile futhi ukugwema ukungakhululeki ekukhanyeni kwangaphandle okweqile cishe kunoma yisiphi isimo.
Isigaba 2: Zimnyama ngokulingene. Ukuhlunga kokukhanya kwayo kuhlunga kusuka ku-18% kuye ku-43%. Zikhonjiswa izinsuku zokukhanya okujwayelekile.
Isigaba 3: Ukuhlunga kokukhanya kwayo kuhlunga kusuka ku-8% kuye ku-18%. Banombala omnyama, owenele ukuzizwa bekhululekile elangeni, ikakhulukazi ngezikhathi eziphakeme. Banikela ngezinga elifanele lobumnyama ekusebenzeni kwezemidlalo ngaphandle, lapho ubukhulu bokukhanya buguquka ukusuka kokuphakathi kuya kokukhulu.
Isigaba 4: Ukuhlunga kokuhambisa kwayo okulula kusuka ku-3% kuye ku-8%. Izona ezimnyama kunazo zonke izigaba nezihlungi zazo zokudlulisa ukukhanya kusuka ku-3% kuye ku-8% kuphela. Zisetshenziswa ezimeni lapho ukukhanya kufana nokuthi ilensi ye-CAT3 ayanele i-skier.
AMACEBISO OKUKHETHA AMAGLASI AMAKHAYA AMAKHULU AMAHLE KAKHULU
Ukuvikelwa kweso kuyinto ibalulekile kuyo yonke i-skier. Khumbula ukuthi i- gafas ski Kufanele bahlale benokuvikelwa okungama-99% noma okungu-100% okukuvikela ngempela emisebeni.
Qiniseka ukuthi banazo Ukuvikelwa kwe-UV-400,ngoba isihlungi sayo sizokuvikela emisebeni ye-UVA ne-UVB. Ngakho-ke eyakho ukushushuluza izibuko zizoyivimba kahle imisebe yelanga, ngebanga elingaphansi kwama-nanometer angama-400.
Ukuthengaizingilazi ze ski ngamalensi kazibuthe ashintshanayo. Izokuvumela ukuthi usebenzise i-lens ephelele ngokuya ngezimo zezulu nokukhanya lapho uzithola khona. Kanjani? Ungakhetha futhi ushintshe isigaba selensi esikhunjeni sakho njengoba sikufanela khona manjalo.
Khetha izibuko ski nge- "Antifog" noma "uhlelo lwe-Antifog”. Lokhu kuzokusiza ukuthi ugweme ukwenza inkungu ngesenzo.
Khetha izibuko kusuka ski ngohlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi. Amaski kuphela anobuchwepheshe be-anti-condensation azovumela ukubuyiswa komoya okuqhubekayo futhi kuqinisekise ukubonakala okungcono.
Ukuthenga izingilazi ze ski elingana ubuso nobuso bakho kahle. Kumele babe nemichilo yokulungisa ukushelela ukuyilungisa kahle ekhanda nasekhanda.
Bheka izibuko ski ukukhanya. Izinto ezitholakalayo yi-thermoplastic polyurethane, enikeza ikhwalithi ephezulu nokukhanya.
FUNDA KABANZI NGE-SKI NEZIMODLALO ZAYO EZIDUME KAKHULU!
Uma uqala ukushushuluza eqhweni, ungahle wesabe, nokuthi usajwayela ukuhamba ngesivinini eqhweni noma uphathe yonke into ngesandla. Futhi qiniseka ukuthi njengamanje unenhlonipho enkulu nokuqapha ukuthatha isivinini. Ungakhathazeki, ukuzijwayeza kwenza kuphelele! Kumayelana nokuzinikela okuningi, izimo ezinhle kakhulu nokuningi, umoya omningi wokuzijabulisa. Kuzoba yindaba yesikhathi kuphela ngaphambi kokuthi kube okungokwemvelo ngokuphelele kuwe ukugqoka ama-skis akho, thatha eyakho ukushushuluza izibuko, bese kukugcwalisa nge-adrenaline lapho ushibilika eqhweni.
Akungabazeki ukuthi skiUngomunye wemidlalo oyinselele futhi ophelele kunayo yonke, futhi ngenxa yalesi sizathu unezindlela eziningi zokuzijwayeza nokukujabulela. Yize kunezigaba eziningi nezinhlobonhlobo ze ski lolo shintsho kusuka esifundeni kuya esifundeni, kungashiwo ukuthi izindlela zokushushuluza Okuthandwa kakhulu yilawa: i-alpine skiing, ukushushuluza unqamule izwe, ukushushuluza unqamule izwe, ukushushuluza kwe-freeride, ukushushuluza ngejubane nokushushuluza kwe-freestyle. Qhubeka ufunde futhi ufunde kabanzi ngabo!
I-Alpine Skiing ibizwa nge-Alps, isifunda lapho yaqala ukwenziwa khona ekuqaleni. Ingenye yezemidlalo yakudala futhi ethandwa kakhulu, futhi ngenxa yalesi sizathu yaziwa nje ngokuthi “ukushushuluza”. Kususelwa ekwehleni okunama-skis eqhweni elandela umzila ophawulwe ngamabhekhoni aluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu (amasango), emithambekeni yezintaba ezimfushane ngesikhathi esifushane kakhulu.
Izindlela ze-Alpine Skiing
Yenqaba: umncintiswano wezinsuku ezintathu, owokugcina kube isivivinyo ngejubane le-breakneck.
I-Slalom noma i-Slalom: umzila omfushane onamasango amaningi asatshalaliswa endleleni (phakathi kuka-55 no-75) ngebanga elingu-75cm no-15m phakathi kwawo. Ukujika kulo mzila kuqinile futhi kuvame ukuba yinkimbinkimbi; intandokazi yochwepheshe.
I-Slalom enkulu: Kwenziwa iziphansi ezi-2 ngomzila ngamunye; kudinga ukuthi i-skier ibe nolwazi oluningi ekhoneni ngejubane elikhulu. Isamba esincane sezikhathi zombili ezenzakalweni simemezela ophumelele. Le modi inciphisa ibanga phakathi kweminyango yakho okungenani kube ngu-5m. Le modi yehlisa inani lamasango ngokuqhathaniswa neSlalom ejwayelekile.
I-Super Giant Slalom (Super G): Le ndlela ifaka isivinini ngokunemba nangokushesha, futhi yenziwa ukwehla okukodwa. Noma ngubani okwazile ukukwenza ngesikhathi esifushane nguye onqobayo.
Okufanayo: Siqukethe okwehla ngesikhathi esisodwa kumzila omfushane. Ukushushuluza okuhambisanayo kuyajabulisa kakhulu ngoba onqobayo ungowokuqala ukweqa umugqa wokuqeda.
Kuhlanganisiwe: Inezingxenye ezimbili, enye ye-slalom enye eyehlelayo. Kudinga ukucacisa okukhulu namasu wejubane ukudlula konke okunye. Kulokhu, oncintisana naye othola isamba esiphansi sezikhathi zakhe ezimbili ezihamba phambili uba ngumnqobi.
El i-alpine ski empeleni kuyi- imikhuba ye-ski esetshenziswa kakhulu Futhi kuqinisekile ukuthi kungani uqale noma uzoqala kulo mdlalo. Hlala wazi ukuthi kuyindlela ongafanele uyenze uma ungenayo imishini efanele futhi inhle ukushushuluza izibuko.
I-CROSS-COUNTRY SKI / NORDIC SKI
Kuyaziwa nangokuthi ukushushuluza kweNordic, ukushushuluza ngezwe eliwela izwe noma ukushushuluza unqamule izwe. Kubandakanya ukuhamba amabanga amade ngejubane elikhulu ngesikhathi esifishane, ekushiseni, endaweni eyisicaba noma emithambekeni elinganiselayo. Lezi yizindlela zokushushuluza kweNordic:
I-Classic Nordic Ski
Ukushushuluza ezweni elihlanganayo kuhlanganisa ukushushuluza ezintabeni nasezintabeni, futhi akwenziwa ezindaweni ezimakiwe noma ezilungiselelwe. Isimo somzimba esihle kakhulu sibalulekile ekusebenzeni kwaso, kokubili ukukhuphuka nokwehla kwentaba. Kule ndlela ye skikokubili ukwenyuka nokwehla kwenziwa njengohambo.
IFreeride ifomu le- ski kuyamangalisa lokho okwenziwe nge-off-piste, futhi yakhelwe ikakhulukazi i- nabagibeli ngomoya okhululekile. Ayilandeli umzila ochaziwe, ngakho-ke i-skier ikhululekile ukukhetha ukuthi ihambaphi. Lokhu kukhethekile kukwenza kujabulise ikakhulukazi ngoba sithatha inkambo yethu, ngenkathi sazisa ukubukeka komhlaba ngendlela ehlukile nengafani. Kwenziwa ezintabeni ezisezintabeni lapho kuneqhwa lempuphu, imithambeka ebonakalayo futhi izithiyo zemvelo, ngakho-ke kubandakanya izingozi ezithile kanye ne-adrenaline eningi esenzweni. IFreeride yindlela eyenzelwe abashushuluzi abanolwazi oluningi kwezemidlalo.
IFREESTYLE / FREESKI
Kubhekwe njengenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zefayela le- ski.Abashushuluzi benza iziqu eziningi, ukugxuma nama-pirouettes lapho benza le ndlela. Ekuqaleni yayihloselwe njengendlela yokuzijabulisa, kepha manje isiphenduke umdlalo owaziwayo weqhwa. Kufaka phakathi ukweqa okuphezulu nezithiyo (imigodi nezindunduma) ukwenza iziqu. Izindlela ze-freestyle noma ze-freeski yilezi:
KUKHULULEKILE ISKI / IKILOMETER
Siqukethe ukwehla emthambekeni ukufinyelela ijubane eliphakeme kakhulu kumathrekhi e-1km aklanyelwe ezemidlalo ngokukhethekile. Into ejwayelekile ukuthi abagibeli bejubane badlula ku-200km / h futhi bavamise ukuzihlomisa ngamasudi enziwe nge-polyurethane noma i-latex, futhi bagqoke izigqoko zokuzivivinya ezinamandla, izigxobo ezigoqiwe noma ezithambekele okungenani eziyi-1m, nama-skis anobude obungu-2.4m ubude no-10cm ububanzi. El ski ijubane luhlobo lwezemidlalo ukuthi yaduma ngo-1930, emncintiswaneni owawuseSaint-Moritz (eSwitzerland), yize okwamanje awuthathwa njengomkhakha wezemidlalo wama-Olympic.
Manje njengoba sesazi okuncane mayelana ne- izindlela zokushushuluza eqhweni y iziphi izibuko zokushushuluza ezingcono kakhulu ongawuthenga kulo mdlalo, usondela ngokwengeziwe ekuphumeni futhi ujabulele isenzo eqhweni njengoba sikufanele ngempela. Khumbula ukuthi imidlalo eyeqisayo idinga ukuzilungiselela okuningi ngokomzimba nangokwengqondo, kanye namaqembu ezemidlalo amahle kakhulu.
Zijwayeze okuningi futhi uzilungiselele kahle kakhulu ukuzijabulisa ngokuhle okuthile ukushushuluza izibuko nganoma yiziphi izindlela zayo!
Lezi izinzuzo zokugqoka izibuko kazibuthe zokushushuluza!
Ukushushuluza eqhweni noma eqhweni akuwona umdlalo. Le yimidlalo eyeqisayo edinga ukulungiswa nemibandela efanelekile. Into ebaluleke kakhulu ukuthi ufake ikhwalithi engcono kakhulu kwimishini leyo
Imithambeka ehamba phambili eYurophu ukugqoka izibuko zeqhwa kule sizini yokushushuluza!
Abalandeli balungisa izibuko zabo ze-snowboard ukujabulela ngokugcwele isizini ye-ski. Chofoza lapha bese uthola ukuthi yimaphi amathambeka amangalisa kakhulu eYurophu! Ngabe usuvele uyazi ukuthi iyiphi i-t
Yazi izitayela zakamuva zokushushuluza eqhweni ezingama-2021!
Bobabili abashushuluzayo nabasaqalayo kufanele bavikele ukubona kwabo ngezigqoko zokushushuluza. Akungabazeki ukuthi yisikhathi sokuvuselela okwakho kule sizini.Qhubeka ufunde futhi uthole izinzuzo ze
Ama-snowpark amahle kakhulu lapho ungagqoka khona izibuko zakho ze-ski
Ingabe usuvele unesiqiniseko sokuthi iyiphi indawo oyithandayo yeqhwa? Noma kungani ungazami kuzo zonke lezi ezinkulu esizincomayo? Phuma ku-ajenda bese uhlela ukuthi ubalekele eqhweni. Izinkulungwane zokukulindela
Lungisa izibuko zakho zeqhwa Izikhathi zokuvula kabusha!
Isizini ski sika-2020/2021 sesizoqala! Izindawo zokungcebeleka ekushushuluza eqhweni bezisungula inqubo ethile amasonto ukuze zikwazi ukuvula kabusha ngokuphepha ... futhi izibuko zakho zeqhwa zizoba yi-el
Izibuko ezishushuluza noma izibuko zeqhwa Ngizoqala kuphi?
Uma usacabanga ngokuqala emidlalweni yasebusika, akukephuzi kakhulu ukubuyekeza okuncamelayo lapho ukhetha ukuthi ungaqala kuphi, khetha ukuthi imaphi amasu afanele wena futhi uwaqonde
Ukwehla kwe-off-piste ne-Snow Goggles yakho Okuhamba phambili kwe-freeride!
IFreeride wuhlobo lwebhodi lokushibilika eqhweni lapho wenza khona ukwehla okungekho-piste ngokuphelele, eqhweni eliyintombi nto, enezibuko ezinhle zeqhwa, ukugwema wonke amadwala nezithiyo eziphumayo
I-Snowboard Goggles Khetha okuhle ngezinyathelo ezi-3 nje!
Uma ungena emhlabeni we-snowboarding, noma usuvele ufuna ukufaka izibuko zakho zakudala zeqhwa ngezingcono, ezilungiselelwe kangcono futhi ezingazweli, sinefomula ephelele ongayikhetha.